जात व्यवस्था : अनुभूति र स्वीकारोक्ति - CentralKhabar - No 1 Online News Portal from Nepal
जात व्यवस्था : अनुभूति र स्वीकारोक्ति
सेन्ट्रल डेस्क प्रकाशित मिति : ८ असार २०७८, मंगलवार १९:१३
चार कक्षामा थिएँ । तीन कक्षासम्म चल्ने प्राथमिक स्कुलको पढाइ पूरा गरेर वरपरका स्कुलबाट हाम्रो माविमा आउने विद्यार्थीको घुइँचो हुन्थ्यो । हाम्रो गाउँभन्दा माथी लेकबाट ९/१० जना तामाङ साथीहरु पनि पढ्न आएका थिए । त्यसमध्ये २ जनाको योग्यताले स्कुल पिट्यो । एकजना साथी मसङ्ग निक्कै नजिक भयो, हामी संगसंगै पढ्न थाल्यौं । परीक्षामा हामी हाराहारी हुन्थ्यौँ । नेपाली/ सामाजिक जस्ता विषय भाषाका कारण बिगार्दा बिगार्दै पनि म्याथ, साइन्स र इङ्ग्लिसबाट उसले त्यतापट्टीको नम्बर कभर गर्थ्यो । प्रतिभा, क्षमता र योग्यतामा उ मभन्दा कहिल्यै कमजोर थिएन । अङ्ग्रेजीमा चिट्ठी लेख्नु सरकारी विद्यालयमा ठूलै प्रतिष्ठाको विषय हुनेगर्थ्यो । उसले अङ्ग्रेजीमा चिट्ठी लेखेर स्कुल हल्लाउँथ्यो । मेरो यस्तो प्रतिभाशाली साथीलाई एकदिन यो व्यवस्थाले उल्टै हल्लाइदियो । ७ कक्षा पुग्नासाथ एक बिहान तामाङ बा/ काका/ दाजुहरुको लहरमा मिसिएर मेरो साथी भारी बोक्न लद्धाख हिँड्यो । तामाङहरु लद्धाखलाई “लदक” भन्थे, मेरो साथी झिसमिसेमै लदक हिँडेको थियो । साथीले लदकमा एकपछी अर्को भारी उचाल्दै गर्दा मैले यता कक्षामाथी कक्षा चढ्दै नम्बर भरिएका गह्रुङ्गा सर्टिफिकेट उचाल्दै थिएँ । एसएलसी दिएर थप पढ्न काठमाडौ हिँड्दा मेरो “हैसियत” गाउँबाट सहरमा उक्लिएको थियो । मेरो साथीको “हैसियत” लद्दाखबाट खाडितिर भासियो ।
“पढाइ कति पुग्यो सर ?”- उ अप्ठ्यारो मानेरै सोध्छ ।
“मास्टर्स गर्दैछु”- मपनी टाउको आधी झुकाएरै भुइँ हेरेर जवाफ फर्काउँछु ।
त्यो ग्याङ्गमा जसले यस्तो भनेको थियो, पछाडि फर्किएर सोच्दा मलाई लाग्छ ह्वास्सै जातिवाद गन्हाउने उसले ठिकै भनेको थियो । दमाइको छोरालाई “हाकीम” बनाउने देश थिएन यो । जत्रोसुकै योग्यता भएपनी उसको योग्यता जाँच्ने परीक्षक कहिल्यै भेटिएन ।
म उपन्यासकार हुन्थेँ भने कुनैपनी मान्छेलाई यति निरीह र आत्महिन रुपमा प्रस्तुत गर्ने थिइन । उत्पीडन भित्रैका उसका सौर्य र “नायकत्व” कथाहरु खोज्ने थिएँ । तर मैले आफ्नो जीवनयात्रामा देखेका नग्न दृश्य हुन् यी । यस्ता खातका खात दृश्यहरु मेरो मनभरी उकुच पल्टिएका छन् । ती सबै दृश्यहरु आँखा अघि आउँदा पनि म झस्किन्छु । के तपाईं मेरा यी तीनजनै साथीहरु म जत्तिकै थिएनन् भन्न सक्नुहुन्छ ? यी सबै ज्ञान, प्रतिभा,विवेक, प्रज्ञा र मेधा सबैमा मभन्दा अगाडि थिए । तर तिनका सबै योग्यता र सपनाको निर्मम हत्या भयो । कसले गर्‍यो हत्या ? उत्तर सरल छ- हामीले । हामीले नै बनाएको यो क्रुर र अमानवीय व्यवस्थाले ।
प्रिय साथीहरु/ आफन्तहरु/ परिचितहरु,
मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर, २१ मन्त्री पदमुक्त